အများသုံးအားသွင်းစခန်းအတွက် dual Type2plug ပါသော EV Smart 44kW Charger
ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်သည်စက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအားသွင်းစက်သည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတိကျသေချာစေရန်နှင့်တပ်ဆင်ထားသော RCD ကိုသေချာစေရန် MID အသိအမှတ်ပြုမီတာကိုအသုံးပြုသည်။ အားသွင်းစက်တွင် 6mA DC ယိုစိမ့်မှုထောက်လှမ်းခြင်းလည်းပါ ၀ င်သည်၊ RCD အမျိုးအစား B. ၏စျေးကြီးတက်သောကုန်ကျစရိတ်ကို ၀ ယ်လိုအားကိုတစ်နေရာတည်း၌အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုတည်းဖြင့်ကွန်ရက်၌ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ open protocol OCPP 1.6 အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အားသွင်းစက်လည်ပတ်မှုနှင့်အခြေအနေကိုလက်ရှိ ba မှစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်သည်။
Sound Box Blue Tooth Connection ပါသော Wireless Charger
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်အမည်： ကြိုးမဲ့အားသွင်းစပီကာမော်ဒယ်နံပါတ်： X7101 input： DC5.0V/3A 9V/2A 12V/1.5A Output： Max 10W အားသွင်းအကွာအဝေး≤8mmအသံအမျိုးအစား： Smart bluetooth အသံစပီကာ： 1.5〃.4 ohms ဆူညံသံ 95dBA ဘလူးတုသ်ဗားရှင်း： Jerry2.1+EDR Sensitivity： 350MV အရောင်： အမဲရောင်ထုတ်ကုန် Wireless ကြိုးမဲ့အားသွင်းကြိုး Bluetooth စပီကာကြိုးမဲ့အားသွင်းကြိုးမဲ့ဘလူးတုသ်ပြန်ဖွင့်ခြင်းဟန်းဖရီးခေါ်ဆိုမှုမိုဘိုင်းအထောက်အပံ့အသံအချက်ပြမှတ်ချက်ဤထုတ်ကုန်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်သာသင့်တော်သည်။
Mode2Charger ပါသောအိတ်ဆောင်အဆင့် ၂ EV Charger များ
အင်္ဂါရပ်များ Plug & play အသုံးပြုရလွယ်ကူ။ လက်ရှိခလုတ်ကို sinple နှိပ်၍ ထိန်းညှိပါ။ အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှု Max 7.4kw အားသွင်းပါဝါ။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးသင်၏ EV အားအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရ။ လုံခြုံစိတ်ချရသော TUV & CE အသိအမှတ်ပြုထိပ်တန်းအရည်အသွေးကောင်းများ ချိန်ညှိနိုင်သော Max7အဆင့်လက်ရှိလက်ရွေးစင်အရောင်မျက်နှာပြင်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီအားသွင်းမှုအခြေအနေကိုပြပါအစိုင်အခဲဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းခိုင်ခံ့သောကေဘယ်လ်ထိန်းသိမ်းမှု Drop & Crush resistan ...
ထုတ်ကုန်ထူးခြားချက် NY7501G-1 သည် NY7501G ကို အခြေခံ၍ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းအတွက်အလွန်ပေါင်းစပ်ထားသော transmitting chip တစ်ခုဖြစ်သည်။ NY7501G wireless charging chipset သည် wireless charging အတွက် Qi standard of wireless Power Consortium (WPC) နှင့်ကိုက်ညီသော wireless charging အတွက် transmitting chip တစ်ခုဖြစ်သည်။ QFN44-0505X075-0.35 တွင်ထုပ်ပိုးထားပြီး၎င်းအားအချက်ပြဖျက်သိမ်းခြင်းအပြင်အကာအကွယ်များစွာဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ နိုင်ငံခြားအရာ ၀ တ္ထုများဖြင့်ဖော်ပြထားသော ...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ၁ ။ ဤအတိုင်းအတာကိုအသုံးချပါဤကြိုးမဲ့အားသွင်းလက်ခံသူ module သတ်မှတ်ချက်ကို Wireless charger 15W တွင်သုံးရမည်။ ၁၀ မီလီမီတာထက်နည်းသောအကွာအဝေးကိုအာရုံခံခြင်း ၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေများ၊ RoHS ၃။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် EMC စံနှုန်းနှင့်အညီ၊ WPC ၁.၂ ၄။ ဘေးကင်းမှုနှင့် EMC ခွင့်ပြုချက်၊ CE / FCC ၅။ လျှပ်စစ်လက္ခဏာများ၊ စမ်းသပ် Circuit ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုလျှင် သတ်မှတ်ထားသောဆားကစ်တွင်အောက်ပါဆားကစ်ကိုသေချာသုံးပါ။ 6. 15w ကြိုးမဲ့အားသွင်းလက်ခံသူ၏အလုပ်လုပ်ပုံ： လျှပ်စစ်သံလိုက်အားဖြင့် ...